Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Tale jeneralin'ny Moderna: hifarana amin'ny tapaky ny 19 ny areti-mifindra COVID-2022
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Zon'olombelona • Interviews • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Lehiben'ny mpanatanteraka ao Moderna, Inc., Stephane Bancel
Raha mijery ny fihanaky ny indostrian'ny fahaizan'ny famokarana izy tao anatin'ny enim-bolana lasa izay dia tokony hisy fatra ampy amin'ny tapaky ny taona ho avy mba hahafahan'ny olona rehetra eto amin'ity Tany ity hatao vaksiny.
Raha ny filazan'i Stephane Bancel dia hitovy amin'ny trangan'ny gripa ny zava-misy amin'ny COVID-19.
Ny vaksinin'i Moderna's COVID-19 dia nankatoavina tamina firenena manodidina ny 100, ary izy koa dia iray amin'ireo zava-mahadomelina telo nampiasaina tamin'ny fampielezana vaksiny tany Etazonia.
Hisy jab azo ampiasaina na dia ho an'ny zazakely aza atsy ho atsy ary koa fatra famporisihana ho an'ireo izay mitaky azy ireo.
Lehiben'ny mpanatanteraka ao Moderna, Inc., orinasa mpamokatra fanafody amerikana sy biotechnolojia amerikana monina ao Cambridge, Massachusetts, Stephane Bancel, dia nanolo-kevitra fa ny tranga misy amin'ny COVID-19 dia hitovy amin'ny trangan'aretina gripa, ary ny fitomboan'ny famokarana vaksinina dia mety hahita ny nifarana ihany ny areti-mifindra coronavirus tamin'ny tapaky ny taona 2022.
"Raha mijery ny fanitarana ny fahaiza-manao famokarana manerana ny indostrialy ianao tao anatin'ny enim-bolana lasa izay dia tokony hisy fatra ampy amin'ny tapaky ny taona ho avy mba hahafahan'ny olona rehetra eto ambonin'ny Tany atao vaksiny," hoy i Bancel tamin'ny resadresaka nifanaovana taminy.
Raha ny filazan'ny CEO jeneralin'ny pharma amerikana dia hisy jabs na dia ho an'ny zazakely aza atsy ho atsy ary koa ny dosie fampiroboroboana ho an'ireo izay mitaky azy ireo.
"Izay tsy mahazo vaksiny dia hanao tsimatimanota ny tenany satria voa ny karazana Delta," hoy ny tale jeneraly.
Rehefa nanontaniana izy hoe rahoviana no afaka mivoaka ny areti-mandringana ny zanak'olombelona, ​​izay efa nahita olona 219 tapitrisa voan'ny aretina ary maty maherin'ny 4.5 tapitrisa, ary niverina tamin'ny fiainana ara-dalàna, dia namaly i Bancel hoe:
maoderinaNy vaksinin'ny COVID-19 misy doka roa dia nekena any amin'ny firenena 100 eo ho eo, ary iray amin'ireo fanafody telo ampiasaina amin'ny fampielezana vaksiny any Etazonia. Ny jab dia mirehareha amin'ny tahan'ny fahombiazan'ny 93% enim-bolana taorian'ny fitantanana ny fitifirana faharoa, zara raha nihena ny 94.5% voalaza nandritra ny fizahan-toetra fizahan-toetra telo.
Na izany aza, nanantitrantitra i Bancel fa ireo nanao vaksiny dia “tsy isalasalana” fa mila mpamelombelona indray mandeha mba hiarovana azy ireo amin'ny virus. Nilaza izy fa manantena ny tanora tanora hahazo tifitra booster indray mandeha isaky ny telo taona na antitra - indray mandeha isan-taona.
maoderinaNy booster dia misy antsasaky ny fatra amin'ny singa mavitrika raha oharina amin'ny tsindrona tany am-boalohany, izay manome ny orinasa fotoana bebe kokoa hampitomboana ny famokarana, hoy izy.
“Ny habetsaky ny vaksinina no singa mametra lehibe indrindra. Amin'ny antsasaky ny fatra, hanana fatrany telo miliara izahay manerantany amin'ny taona ho avy fa tsy roa miliara fotsiny, ” maoderina Nanazava ny CEO
Moderna dia iray amin'ireo mpanao vaksinina enina Amnesty International voampanga ho nandrehitra “krizy momba ny zon'olombelona mbola tsy nisy toa azy” tamin'ny fandavana ny fandraisana anjara amin'ny fandraisana andraikitra hampiroborobo ny vaksinin'ny vaksinina ary aleony miara-miasa amin'ireo firenena manankarena.
Araka ny tatitry ny Amnesty International, ny orinasa amerikana miaraka amin'ireo ankafizin'ny Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca ary Novavax no tompon'antoka tamin'ny zava-misy fa 5.76 miliara dôtara notanterahina manerantany, 0.3% fotsiny no lasa nankany amin'ireo firenena ambany karama .
Nick Eckerling hoy:
Oktobra 3, 2021 ao amin'ny 18: 27
COVID dia hanao